HAL BOOLI AH: Ninkii soo helay Donnarumma oo sheegay inuusan la yaabin dhaqanka gurracan ee laacibka!! (Akhri sheeko yaab leh oo dhacday sanado kahor) – Gool FM
Raage June 17, 2017
(Milano) 16 Juunyo 2017 – Ninkii soo helay Gianluigi Donnarumma ayaa reer Milan u sheegay in calaamadda roobku ay daruur tahay isagoo sheegay inuu wiilkani dhibloow ahaa kahor intii uusanba xitaa la xiranin Mino Raiola.
Goolwalaha ayaa shalay AC Milan oo soo korisay wuxuu uga dhaartay inuu heshiis cusub saxiixo, isagoo aan xitaa sharfin maamulka kooxda ee usoo diray Raiola, oo kulan 6 daqiiqo uun qaatay Milan ugu sheegay runta qaraar oo ah inay Rossoneri goolwale kale raadsato.
“Dadka qaar kolleey waxay ku noqotay arrin aan lagu farxin, balse waxaan ka mid ahaa dad yar oo sii odorosi karey inay tani dhacayso,” ayuu Giocondo Martorelli oo ahaa ninkii soo helay Donnarumma u sheegay TMW Radio.
“Ogaanshaha xaalado badan oo kahor iyo kaddiba dhacay, la yaab malaha inaan Donnarumma cusboonaysiinin qandaraaskiisa, waa arrin u baahan in dib loo raaco si loo ogaado cidda ka dambaysa inay in ay heerkan gaarto sanad ka hor marka uu qandaraaskiisu dhacayo.
“Waan aqaanna wax kasta oo ku saabsan Donnarumma – qoyskiisa, qaraabadiisa, dhinac ksta oo gurigiisa ah. Waxaase jira wax aan la yaaban ahay oo ay TV-yada iyo wargaysyadu iska dhig dhigayaan inaysan ogayn. Taariikhda Donnarumma waa mid cakiran, tanina waa natiijada hab dhaqan aan bilowgiiba cadaalad ahayn.” ayuu raaciyay.
“Ma dhihi lahayn anigaa soo helay, kaliya waxaan meesha ku habboon joogey xilligii ku habboonaa nasiib wanaag. Wuxuu ahaa 10 jir xitaa indhoolkuna wuu arki karey inuu hibo leeyahay.
“Waxaan cunuggaan ku arkay Napoli isla markiina waxaan wacay Piero Ausilio oo Inter jooga. 3 sano iyo bar, ilaa 2013, waxaa naashnaashaysay Inter oo uu 7 tijaabo u maray.
“Wax waliba dhag bay ahaayeen ilaa markii la gaarey xilligii qandaraaska la saxiixi lahaa. Galabtaa, kulligeen heshiis baannu gaarney – isaga, aabihii iyo hooyadii – kaddib ku dhowaad afar sano oo xasaasi ah.
“Subixii xigey, waxayba la heshiiyeen AC Milan, iyagoon wax digniin ah na siinin, waxaa jira hordhacyo i garansiin kara in Donnarumma uu sidan u geli karo Milan.
“Waan la yaabay go’aankiisa, haba ku darin naadi Milan oo kale ah, balse misna fikrad baan ka haystey arrintaa…
“Waan ku celinayaa: Qoyskiisu waxay la heshiiyeen Inter 2013. Waxay ku noqdeen Napoli, subixii xigeyna tikit bay Milano u goosteen waxayna la heshiiyeen AC Milan. Qandaraaskii ay saxiixeen 24 saacadood ka hor qiimeba uguma fadhiyin.
“Maxaan iraahdaa oo intaa ka badan? Waan yaabay inay weriyayaasha qaarkood aysan xaaladda la soconin ama ay iska dhig dhigaan inaysan ku soconin oo aysan dhegeysanin.” intaa ayuu warkiisa kusoo afjaray Giocondo Martorelli oo ahaa ninkii soo helay Donnarumma oo waraysi dheer siinayay TMW Radio.
Waxaa warka Martorelli ee Donnarumma fiidkii xalay ahaa qayb ahaan ka marqaati kacay seeddiga laacibkan oo Twitter-ka kusoo qoray war uu markiiba tiray oo u dhignaa sidatan:
“Kuwa ku dhaliilayaa kuma yaqaannaan. Milan, waa naadi lagu shactiraysto.”
GOOGOOSKA: Sweden U21 vs England U21 0-0 (Sweden oo barbarro ku bilowday difaacashada Koobka Da'yarta Qaramada Yurub)